Maninona aho no manome torohevitra ireo orinasa SaaS hanohitra ny fananganana CMS azy manokana | Martech Zone
Nisy mpiara-miasa voahaja niantso ahy avy tao amin'ny masoivohon'ny varotra mangataka torohevitra vitsivitsy rehefa niresaka tamin'ny orinasa iray izay manangana sehatra an-tserasera izy. Ny fikambanana dia noforonina mpandrindra tena mahay ary mahatohitra ny fampiasana rafi-pitantanana atiny (CMS)… Raha tokony hitondra fiara hametraka ny vahaolana arahin'izy ireo manokana.
Zavatra efa henoko taloha… ary matetika aho no manohitra izany. Matetika ny mpamorona dia mino fa ny CMS dia latabatra tahirin-kevitra fotsiny izay hitazomana ny atiny ary azo havaozina mora foana arak'izay ilaina. Saingy tsy ampy fisehoana an-jatony omen'ny CMS izy ireo. Tsy lazaina intsony ny laharam-pahamehana amin'ny orinasa.
Fa maninona no tsy tokony hanangana CMS ianao?
Fahaiza-manao fikarohana sy haino aman-jery sosialy - Nanoratra aho Ireo fiasa izay takiana amin'ny rafi-pitantanana atiny rehetra ho an'ny fanatsarana ny motera fikarohana ho an'ny orinasa iray izay tadiavin'ny mpamolavola hanao izany. Ny lahatsoratra dia mitety ny zava-drehetra mila manana rafitra fitantanana votoaty - avy amin'ny sitemap XML, amin'ny alàlan'ny sary asongadinina… ilaina hampiroboroboana sy hanafangaroana ny atiny manerana ny tranonkala mora foana. Ny fanesorana ny iray amin'ireo fiasa ireo dia mampidi-doza ny orinasanao amin'ireo mpifaninana aminao. Tsy lazaina intsony ny laharam-pahamehana miovaova na amin'ny fikarohana na amin'ny fiaraha-monina - miaraka amin'ny fomba vaovao hanatsarana, hamerenana, hanatsara sy hampidirana ny atiny amin'ireo mpampita sy fantsona ireo.
Laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana - Rehefa mamelona sehatra an-tserasera ianao dia tsy ho toy izany velively ny sehatra misy anao vita. Bot, endri-javatra, fampidirana… ny ainao no an-tserasera. Vokatr'izany, ny rafi-pitantanana votoaty an-tsokosoko izay namboarinao dia tsy maintsy apetraka lavitra ny lisitry ny laharam-pahamehanao. Satria ny ekipa mpivarotra anao dia mijery manatsara sy mampiroborobo ny atiny hitondrana ny varotra, voasakana izy ireo noho ny tsy fisian'ny endri-javatra ao amin'ny CMS any an-trano. Vokatr'izany, ny varotra sy ny marketing dia tsy afaka mifanaraka amin'ny fahaizany feno. Ny fampiharana CMS izay noraisina be dia be dia midika fa misy ny fanohanana sy ny fanatsarana mitohy miaraka aminy. Ireo orinasa manohana ny CMS dia manana an'io ny laharam-pahamehana, ary afaka mitazona ny orinasanao ny sehatra ho laharam-pahamehanao.
Vola tsy ilaina izany - Fa maninona ianao no manandrana mamorona zavatra efa voaorina? Sehatra toa WordPress manana fahaiza-manao mahatalanjona amin'ny alàlan'ny fanalefahana taonina. Raha te hanana ny ekipanao dia mety hampiasa WordPress ho a headless CMS… Izay ahafahan'ny ekipam-barotra mampiasa ny fahaizany rehetra, fa ny ekipan'ny fampandrosoana dia afaka mampiasa ny WordPress API hamoahana sy hampiditra azy ao amin'ny sehatra misy anao. WordPress dia afaka mampiasa ny fahaizan'ny Single Sign-On (SSO)… mizara anarana mpampiasa sy teny miafina miaraka amin'ny sehatra misy anao. WordPress dia azo alefa amin'ny subdirectory… na ny app anao dia mety mampiasa proxy mivadika.
Eritrereto ny sasany amin'ireo scenario izay mety tadiavin'ny ekipanao marketing.
Angamba te-hanitatra atiny iray pejy ianao, hanampy sekely ary hampiditra tsanganana… manana izany malefaka izany ve ny CMS anao?
Angamba te-hanampy fisoratana anarana amin'ny hetsika izy ireo… manana fahaizana mandefa rohy sy fampahatsiahivana ve ny CMS anao?
Angamba te-hiditra ebook maimaim-poana ianao, manana ny fahaizany mipoitra tampoka ve ny ekipan'ny varotrao ary manitsy ny sehatry ny fisoratana anarana?
Angamba ianao te hampizara ny fifamoivoizan'ny mpanjifanao amin'ny fivezivezena ataonao - manana fitaovana ve ianao hampisarahana ireo karazana fifamoivoizana roa amin'ny analytics hahafantarana ny fiantraikan'ny varotrao?
Angamba te hanana automatique ny mailakao ianao ary hampiditra ireo lahatsoratra bilaoginao farany mba tsy hiorenanao ny mailaka anao isan-kerinandro… manana RSS RSS azonao zahana ve ianao amin'izany?
Misy scenario an-jatony ara-bakiteny izay mitaky fahaiza-manova ny CMS mba hanananao tombony feno ny atiny amin'ny ezaka varotrao. Ny ekipan'ny fampandrosoanao dia hanana fotoana sarotra hanarahana CMS maoderina izay manana mpamolavola manontolo andro am-polony manamafy sy manohana ny fahaizan'izy ireo CMS… ary ny lohahevitr'ireo lohahevitra sy ireo mpamorona plugin manitatra ireo fahaiza-manao ireo.
Ary Angamba tokony hampidirina CMS ianao
Nanome antony vitsivitsy aho fananganana CMS. Ny fomba fijery iray izay tsy voalaza etsy ambony dia ireo fotoana mety azo avy amin'ny fampidirana ny anao sehatra fototra miaraka amin'ny CMS.
Orinasa iray niara-niasa tamiko dia nanana script tsotra izay azo ampidirina ao amin'ny tranonkalanao hamantarana ireo orinasa tonga eo amin'ilay tranokala. Namorona plugin WordPress aho izay nanampy ny script ho azy ary nanome fomba fijery ao amin'ny WordPress ho azy ireo. Rehefa navoaka tao amin'ny trano firaketana WordPress ny plugin dia nirongatra ny fananganana azy ireo. Fa maninona Satria ireo mpampiasa WordPress dia tsy nitsahatra nitady plugins nanome ny endri-javatra nomen'izy ireo.
Raha nanangana tontonana administratif lehibe nampidirina azy tamin'ny alàlan'ny WordPress Plugin ireo mpamorona anao, dia manitatra be ny fatran'ny SaaS anao. Rehefa manana fampiharana an-tapitrisany eran'izao tontolo izao izy ireo ary mitady hampitombo ny fahitana anao… ny lahatahiry CMS dia mety ho toerana tsara hampiroboroboana ny sehatra misy anao.
Tazomy maimaim-poana ny loharanom-pahalalanao hanohanana ny làlan'ny fiveloman'ny orinasanao - ny sehatra misy anao. Ampiharo ny rafitra fitantanana atiny ahafahana mampiasa tsara ny paikadim-barotra amin'ny atiny.
Tags: manangana vs mividyCMScms sy seocms sy media sosialycms fampandrosoanarafitra fitantanana atinyheadlesscms tsy misy lohaproxy mivadikawordpress api
Ataovy mandeha ho azy ny fananganana ny API REST, ny tontonana Admin, ary ny antontan-taratasim-paositra